Ndisifumana njani isicelo seNgoma kwiTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndisifaka njani isicelo sengoma kwiTwitch?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 341
Izicelo zengoma zezinye zeenzuzo kunye nezinto ezinqabileyo ezinikezelwa yinethiwekhi yokunxibelelana nabasebenzisi bayo, ziyindlela yokwenza abasebenzisi bayo bathathe inxaxheba kwimisebenzi eyahlukeneyo eqhutywa kweliqonga, ukuze kwenziwe uhlobo lokudityaniswa Uluntu olwenza "ubomi" eqongeni.
Olu khetho lwezicelo zengoma ngokusisiseko lunxulunyaniswa nabasasazi kunye nabalandeli babo, njengoko besesitshilo ngaphambili yindlela yokwenza unxibelelwano kunye ukukhuthaza ubudlelwane boluntu phakathi kwemijelo kunye nabalandeli babo, ebavumela ukuba benze ubudlelwane boluntu.
Izibonelelo zokusebenzisa esi sixhobo:
Kuba iingoma ziceliwe ngokuthe ngqo kusasazo, inokubanakho ukuthintela inkqubo ngokusebenzisa izicelo zoqwalaselo ngokweminqweno yakho.
Olu hlobo ukuthatha inxaxheba kukothusa kakhulu kwaye abalandeli bayayithanda kakhulu ke iyathandeka kwaye yonyusa abaphulaphuli.
Ingasetyenziswa njenge uhlobo lomvuzo Ngokunyaniseka kwabalandeli, okukhuthaza abasebenzisi ukuba bathembeke kwisitishi okanye, ukusilela oko, kusasazo.
Ewe into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufumana indawo yokucela ukuculwa kwengoma, cinezela kwaye ke ezinye iindlela ziya kuboniswa, khetha leyo imiselwe AutoDj kuqala.
Cinezela enye indlela kwiisetingi, Olu khetho lunokufumaneka phantsi kwephrofayili yakho, cinezela kwaye xa ukhetho olutsha luboniswa ukhethe oluqhelekileyo.
Kule nto enye indlela yokumisela Sincoma ukuba uvimbe ukhetho, kude kube nguwe wedwa onokugqiba ukuba ubeke ziphi iingoma, oku kukuphepha naluphi na uhlobo lwengxaki nelungelo lokushicilela, kuba ayizizo zonke iingoma ezivunyelweyo ukuba zidlalwe.
Ngokufanayo, sicebisa ukuba wenze isixhobo Yenza, eya kukuvumela ukuba ulawule uluhlu lwadlalwayo olusuka kwingxoxo ukuze ulawulo lwayo lube lula.
Ngenisa ingoma, kukhetho lokudlala kwaye ukhethe enye ngokongeza ingoma, Kuya kufuneka ukongeze iingoma nganye nganye kuba ukuba uyenzela uluhlu olupheleleyo kuya kukunika impazamo.
Chonga kwaye ukhethe iingoma ezingenamalungelo obunini, oku kuya kuthintela iingxaki ezizayo ngeqonga leTwitch, njengoko bebeka isohlwayo kwabo baphula ilungelo lobunikazi.
Nje ukuba umculo ubekhona kwaye ukhethwe, khuphela amakhonkco kwaye unamathisele, njengoko besesikuxelele oku kufuneka uyenze nganye nganye kwisithuba ehambelana nokongeza ingoma kuluhlu lokudlala kwaye ucofe kwiqhosha lokungenisa.
Ngokumalunga nemiyalelo yokuqwalaselwa, kuya kufuneka ucinezele ukhetho lwengoma olusengxoxweni, ngale ndlela uya kuba nakho ukunika abalandeli bakho ithuba khetha umculo ukusasaza, kodwa njengoko sele sibonisile kuwe ngezithintelo ezithile eziya kuthintela iingxaki ezithile eqongeni kunye nezohlwayo ezihambelanayo.
1 Izibonelelo zokusebenzisa esi sixhobo:
3 Indlela yokuyisebenzisa:
Indlela yokucela umngeni kwi-Instagram?
Ungawupapasha njani umxholo ku-Twitter?